श्रीनगरको अर्थ : श्रीनगर नामको ऐतिहासिक तथा रमणीय स्थल चाँहि पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम तानसेन बजारको शिखरमा अवस्थित छ । श्रीनगरको अर्थ र यसको वास्तविक स्वरुपमा देखिएको भिन्नता जिज्ञासाको विषय बनेको छ । ‘श्री’ र ‘नगर’ शब्दहरू मिलेर श्रीनगर बनेको छ । ‘श्री’को अर्थशोभा, सौन्दर्य हुन्छ । भने ‘नगर’ को अर्थ शहर अथवा धेरै मानिसहरू ठूलो बस्ती हुन्छ ।
यसरी श्रीनगरको शाब्दिक अर्थ सुन्दर, रमणीय तथा शोभायमान शहर भन्ने बुझिन्छ । यस अर्थमा श्रीनगर स्थल रमणीय ठूलो बस्ती हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तर तानसेन बजार माथि रहेको श्रीनगरमा शहर देखिनु त परै जाओस् गाउ“सम्म पनि देखिदैन । यसो हेर्दा यो ठाउ“ नाम मात्रको श्रीनगर रहेछ कि जस्तो लाग्छ । श्रीनगरमा अहिले बस्ती नभए पनि सेनकालीन पाल्पा राज्यका राजहरु माहादन्त सेनपृथ्वी पाल सेन र त्यसपछिका प्रशासकहरुले लेखेका ऐतिहासिक पत्रहरूमा श्रीनगरलाई शहरको रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसैले तत्कालिन श्रीनगर शहर अहिले पुरातत्वको विषय बनेको छ । श्रीनगरलाई गौरवमय, शोभायमान शहरको रुपमा हेर्न तथा आदर्श श्रीनगरलाई यथार््थ श्रीनगरको रुपमा पहिचान गर्नका लागि पाल्पा राज्यको इतिहास खोजीनीति गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने श्रीनगरको शाब्दिक अर्थ शोभायमान शहरको रुपमा पाउन सकिन्छ । साथै पाल्पा राज्यको पछिल्लो राजधानीको रुपमा श्रीनगर शहर विकसित भएको पाइन्छ ।
श्रीनगर शहरको सोच
आधुनिक नेपालको निर्माण कार्यमा पाल्पा राज्यको पनि महत्वपुर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ । पृृथ्वीनारायण शाहद्धारा प्रारम्भ गरीएको नेपालको एकीकरण अभियानमा उनका छोरा बहादुर शाहले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । बहादुर शाह नायव भएपछि उनले पाल्पाका राजा महादन्त सेनकी छोरीस“ग विवाह गरी पाल्पास“ग मैत्रीसम्बन्ध कायम गरे त्यसपछि उनले पाल्पा राज्यस“ग सहयोग लिएर पाल्पा बाहेक पश्चिम क्षेत्रका चौबिसी र बाइसी राज्यहरु विजयी गरी विशाल राज्यको निर्माण गरे । उक्त राज्य विस्तार कार्यमा पाल्पाले विशेष सहयोग दिएकोले पाल्पालाई गुल्मी, अर्घाखा“ची, मुसिकोट, धुरकोट र इस्मा राज्यहरु दिएको थियो । ती भु भागका साथै हीरा, मोति, सुन, चा“दी लगायत प्रशस्त धन सम्पति पनि उपहार स्वरुप पाल्पाले पाएको थियो । यसबाट नेपाल र पाल्पाको मैत्री सम्बन्ध अझ बढ्न गएको थियो । यस प्रकारको राज्यविस्तारले नेपाल शतिmसम्पन्न, समृद्ध र सुदृढ राज्यको रुपमा विकसित भयो भने पाल्पा राज्यको पनि सम्मान र समृद्धि बढ्न गयो । त्यतिबेला पाल्पा राज्यको सिमाना पूर्व, पश्चिम र उत्तरमा नेपालस“ग र दक्षिणमा भारतको अवध राज्यस“ग जोडिएको थियो ।
यस परिस्थितिमा पाल्पाका राजा महादत्त सेनले सुरक्षा तथा सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको समृद्ध शहर बनाउने साेंच राखे । त्यस बेला पाल्पा राज्यको राजधानी भैरवस्थान क्षेत्र पूर्णाकोट थियो । जसलाई पाल्पा भनिन्थ्यो । उनले बस्ती विस्तार गरी सुन्दर शहर बसाउनका लागि भैरवस्थानदेखि करिब २ कोशपूर्वको तानसेनमाथिको डा“डालाई रोजे । यो ठाउँ रोज्नुको मुख्य कारणहरूमा यहाँ ठूलो बस्ती फराकिलो ठाउँ थियो । महत्वपूर्ण बस्तीको रूपमा रहेको तानसेन नजिक थियो र त्यसलाई विस्तार गर्न सकिन्थ्यो । यो क्षेत्र पाल्पाको केन्द्र जस्तो थियो । यहाँबाट पहाड र तराई क्षेत्र जान आउन र शासन सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्थ्यो । त्यसका साथै राजपरिवार, भारदार तथा जनताहरूको पनि समर्थन प्राप्त थियो । त्यस्तै अन्य विविध सुविधाहरू र सहयोग पाउने भएकोले उनले त्यो ठाउँ रोजेका थिए । साथै त्यस ठाउ“मा बस्ती बाउनका लागि वि.स. १८४२ देखि नै त्यस ठाउ“को अध्ययन गर्ने र पूर्वाधार तयार गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ । श्रीनगर शहरको निर्माण
पाल्पाका राजा महादत्त सेनले वि.स. १८४४ मा तानसेन माथिको शिखरमा बस्ती बसाई नाम श्रीनगर राखेका थिए । श्रीनगर शहर निमार्ण गरेको भरपर्दो प्रामाणिक अभिलेखमा तानसेन अमरगन्जको बटुक भैरव मन्दिर भित्रको शिलालेखलाई लिइन्छ । त्यस शिलालेखमा उल्लेख गरिए अनुसार राजा महादत्त सेन, उनका भाइहरूमा शूरवीर सेन, करवीर सेन, चन्नदवीर सेन, भार दारहरूमा देवार (मन्त्री) संगमलाल , सरदार उपेन्द्र कार्की, खजाञ्ची चिन्तामणि, मुन्सी विश्वेश्वर, कालिगड द्यंजु, दरोगा मोतीराम, द्धारिया चुरामणि,वि¥या राउत , लेखन ज्योतिर्विद् काशीराम खरिदारजस्ता प्रतिष्ठित व्यतिmहरुको विशेष सक्रियता र २६ हजार पञ्चको मेहनतले श्रीनगर शहर निर्माण भएको थियो । साभार पाल्पा दर्शन